नेपालीको नियति : लाहुरेकी आमा र ऐनाको कथाजस्तो !
नेपाली समाज बडो विचित्र विशेषताहरूले भरिएको छ । अनेक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि एक्काइसौं शताब्दीको उत्तराद्र्धमा आइपुग्दा समेत आधारभूत आवश्यकताकै बारेमा चिन्तित भएर बाँच्नुपर्ने नियति समकालीन नेपालको यथार्थ हो ।
आँखिर किन यस्तो भयो त ? यो एक सामान्य प्रश्न हो । तर यो प्रश्नको उत्तर सजिलो र सपाट छैन ।
नेपाली समाजको चरित्र र मनोविज्ञानबारे चर्चा गर्नुअघि पंक्तिकारले बाल्यकालमा सुनेको एउटा दन्त्यकथा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
उहिले, ऐना मानिसको दिनचर्याको हिस्सा बन्नुअघिको कुरा । पहाडको कुनै गाउँमा हुर्किएर ‘इन्डियन आर्मी’मा भर्ती भएको एउटा लाहुरेले छुट्टिमा घर आउँदा ऐना लिएर आएछ । त्यो ऐना उसले आफू सुत्ने, बस्ने गरेको धन्सार (पहाडमा हुने दुईतले गोठको माथिल्लो तला) को भित्तामा राखेछ । लाहुरेकी श्रीमतीले एकदिन लाहुरे आफ्नो कोठाबाट मस्किँदै, मख्ख पर्दै निस्केको देख्छिन् ।
श्रीमतीको मनमा शंका पर्छ । उपरान्त लाहुरेले थाहा नपाउने गरी कोठामा पसेर नियाल्दै जाँदा लाहुरेनीले आफ्नै तस्वीर ऐनामा देख्छिन् । भित्तामा राखिएको ऐनामा तरुनी युवती देखिएपछि शंकाले लंका जलाउँछ । अन्ततः लाहुरेनी आफ्नो श्रीमानले कुनै महिलालाई धन्सारमा राखेको निष्कर्षमा पुग्छिन् ।
लाहुरेनीले घटनाको बेलीविस्तार लगाउँदै छोराले दोस्री श्रीमती ल्याएको कुरा सासुलाई सुनाउँछिन् । छोरोको बारेमा अपत्यारिलो खबर सुनेपछि लाहुरेकी आमा छोरा–बुहारीको कोठामा पसेर हेर्छिन् । बुहारीले बताए बमोजिम ऐनासामु उभिँदा सासुकै तस्वीर देखिन्छ । लाहुरे छोरोले दाँत फुक्लेकी बुढी आईमाईलाई आफ्नो कोठामा लुकाएर राखेको देखेपछि आमा पनि डाँको छोडेर रुन थाल्छिन् । सासु, बुहारीको रुवाबासी चल्छ । बुहारी सौता भित्रिएको पीरले रुन्छे । सासुचाहिँ दोस्री श्रीमती ल्याएपनि त्यस्ती बुढी नल्याएको भए हुने भन्ने चिन्ताले पिरोलिन्छन् ।
यसप्रकार ऐनाको कथा सासु–बुहारीको रुवाबासीमा पुगेर टुंगिन्छ । कथामा लाहुरे घरमा आएपछि के होला ? भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन ।
कथामा उल्लेखित लाहुरेकी आमाको जस्तो नियतिमा आजको नेपाली समाज गुज्रिरहेको छ । अर्कोतर्फ नेपालका राजनीतिक दलहरू लाहुरेकी श्रीमतीको जस्तो मनोदशाबाट गुज्रिरहेका छन् । जसलाई न त लाहुरेमाथि भरोसा छ, न आफूसँग भएको स्रोतसाधन र त्यसको परिचालनको ढंग नै छ । हिजो के थियो र हिजोदेखि यहाँसम्म कसरी आइपुगियो भन्ने बखान गर्दैमा नेपालको राजनीतिले आजसम्मको यात्रा तय गरेको छ ।
नेपालको अर्थ राजनीति
नेपालमा केही छैन । नेपालका नेता ठीक छैनन् । नेपाल कहिल्यै बन्दैन । यहाँ केही गर्ने वातावरण नै छैन । आजको नेपाली समाजले आफ्नै बारेमा निकाल्ने समग्र निष्कर्ष यही हो ।
नेपालमा केही छैन भन्नेहरूले कथामा जस्तै देशमा पहिलेदेखि जे थियो, त्यो सबैथोक छ र ऐनाको उपस्थितिले नयाँ परिवेश र परिस्थितिको निर्माण गरेको छ भन्ने तथ्य बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपालका नेता ठीक छैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि ऐनासामु उभिएकी लाहुरेकी आमालाई सम्झिनु जरुरी छ । समाजमा जे छ, नागरिकजस्ता छन्, नेतामा त्यसैको रिफ्लेक्सन मात्रै भएको हो । हामी आफूले असल अभ्यास र असल प्रयासलाई महत्त्व दिन थालेकै दिन राजनीति सङ्लो हुन थाल्ने छ । हामीले अपेक्षा गरेजस्तै नेतृत्व समाजमा देखापर्ने छ र त्यस्तो नेतृत्व हाम्रो अपेक्षा पूरा गर्नसमेत सफल हुनेछ ।
नेपाल कहिल्यै बन्दैन भन्नु सबैभन्दा ठूलो भ्रम हो । तर यो त्यति सजिलो विषय पक्कै होइन । सारा देश र सिङ्गो समाजले असल अभ्यास र नैतिक व्यवहारलाई महत्त्व नदिएर केही प्राविधिक विषयलाई मात्रै व्यक्तिको गुणका रुपमा मान्न थालेपछि समाजको लय बिथोलिएको छ । यद्यपि सदैव यस्तै अवस्था रहन्छ भन्नु सही होइन । राज्य व्यवस्था र प्रशासनको कमजोरीमा टेकेर गरिने गलत अभ्यासका कारण असल मानिसहरू नै अल्पमतमा पर्ने अवस्था एकदिन रोकिने छ । राज्य बलियो हुनेछ । प्रशासनले सही र गलत छुट्याउने तथा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्दै समाजको कमान्ड सम्हाल्ने छ । यो विश्वास लिनु जरुरी छ ।
देश बनाउने उद्देश्य देखाएर अघि सरेका अनेक शक्तिहरूको उत्थान, विकास, कतिपयको पतन र आजको समग्र परिवेश हेर्दा इच्छाशक्तिबाहेक देश बनाउने अर्को कुनै शक्ति हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो छैन ।
लाहुरेकी श्रीमतीको जस्तो मनोविज्ञान लिएर बाँचिरहेका युवाको देशप्रतिको बुझाइ र लगाव नबदलिएसम्म विकासले गति लिन सक्दैन । यो सत्य आत्मसात् गर्ने परिवेशको निर्माणमा सबै लाग्नु जरुरी छ ।
सन् २०१५ मा प्रकाशित एक समाचार अनुसार नेपाल भारतको सातौं ठूलो रेमिट्यान्स प्रदायक मुलुक थियो । अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिने पैसाको समेत लेखाजोखा गर्ने हो भने नेपाली युवाले संसारभर छरिएर कमाएको रकमकै हाराहारीमा रेमिट्यान्स नेपालबाट बाहिरिएको विज्ञहरू बताउँछन् । यस्तो परिवेशमा हामीले आफूलाई चिन्ने र आफैलाई बुझ्ने क्षमताको विकास कहिले होला ? यही प्रश्नको जवाफमा आधारित रहेर विकासको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ ।
सबैथोक भएर पनि केही नभएजस्तो हुनु । आफ्नो क्षमता र आफूसँग भएको स्रोतसाधनबारे बेखबर रहनु । तिनको महत्त्व र प्रयोगबारे जानकारी नहुनु आदि कारण हाम्रो आर्थिक–सामाजिक विकासको लागि बाधक हुन् ।
नेपालमा पर्याप्त अवसर र सम्भावना भएकैले एउटा ढोकाबाट बाहिरिएको युरोपेली टेलिकम कम्पनी टेलियासनेरा अर्को ढोकाबाट भित्रिने प्रयासमा छ । नाइजेरियाली अर्बपतिले नेपालको बजारमा लगानी गर्दैछन् । हिमालय एयरलाइन्सदेखि होङ्सी सिमेन्टसम्मलाई हेर्दा चिनियाँ व्यवसायीको नेपाली बजारप्रतिको आकर्षण बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा खुलेका र खुल्न लागेका अनेक व्यवसायमा देखिने र नदेखिने दुवै रुपमा मनग्गे विदेशी लगानी आइरहेकै छ । रोजगारी र रेमिट्यान्सको सम्बन्धलाई नियाल्दा समेत हामीले पाएकोभन्दा तिरेको नै बढी हुने अवस्था छ ।
जहाँसम्म राजनीति सुध्रिने कुरा छ, त्यसका लागि दल नभएर नागरिक जिम्मेवार र जागरुक हुनु जरुरी छ । राजनीतिक नेता समाजको मनोविज्ञानलाई उपयोग गर्ने पात्र हुन् । चाहे संसारको जुनसुकै कुनामा होस्, नेतामा आम पात्र र प्रवृत्तिकै ‘रिफ्लेक्सन’ देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि संसारले यही मुलुकमा देखेका अवसर हामीले नदेख्नु लाहुरेको कथाका पात्रभन्दा फरक नहुनु नै हो । आफूले आफैंलाई चिन्ने, बुझ्ने र सुधार्ने प्रयास नगरेसम्म देश उँभो लाग्दैन । आजको परिवेशमा अकाट्य सत्य यही हो ।
चैत २३, २०७५ मा प्रकाशित